Halloween inounza madhiri anotyisa pamitambo yemavhidhiyo pane Steam, GOG, Kuzvininipisa ... | Linux Vakapindwa muropa
Halloween inounza madhiri anotyisa pamitambo yemavhidhiyo pane Steam, GOG, Kuzvininipisa ...
Starts Halloween, iro bato reAmerica rapararira sehutachiona kuburikidza nenyika dzisiri dzeAnglo-Saxon dzisina. Kwese kwazviri, zvichave zvisinganzwisisike kuti vana havapfeke uye kukumbira zviwitsi, sekutaura kwetsika yeparty iyi, kana kuti isu tinoona specials paTV yetepi yatinofarira kana mafirimu emazuvano aya. Uye iyo nyika yekomputa haina kuda kusiiwa kune ichi chiitiko uye isu tatoona zvipo munzvimbo zhinji dzemazuva ano.
Kwose kwaunobva, uye kana iwe uchipemberera Halloween kana Zuva reDifundos Sezvo kuSpain, iwe unenge uchinyatsoda izvo zvinopihwa uye zvidzikiso pamitambo yemavhidhiyo kuitira kuti vhiki ino isanyanya kutyisa, zvirinani pachikwama chako, uchikwanisa kuchengetedza mashoma maeuro pakutenga mitambo yemavhidhiyo kune yako yaunofarira GNU / Linux distro. Uye ndezvekuti main online online ezvivaraidzo zvitoro, senge GOG, Kuzvininipisa uye Steam, vakagadzirira zvipo zvinowirirana neiri zororo ...
Kana iwe uchironga kutenga mutambo wevhidhiyo, uno mukana wakanaka wekuita kudaro kuti utore mukana nezve izvi zvidzikiso kana mabhadharo. Ndinokukurudzira kuti enda kuSteam, uko iwe kwaunowana madhiri akanaka pamitambo yemavhidhiyo yeLinux senge Kuruboshwe 4 Vakafa 2 kusvika ku80% dhisikaundi, Crypt yeNecroDancer ine dhisikaundi imwechete, 75% yeRise of the Tomb Raider, yakafanana yeMetro Redux Bundle, 70% yeRima Rakasviba Dungeon, 67% yeDungeons 3, 50% yeiyo Kuguma yave Pedyo uye zvakare yePinstripe uye Guts uye Kubwinya, 40% yeRocket Rock Leage, nezvimwe.
Kana zvakadaro Kuzvininipisa uye GOGIvo havana kuda kusiiwa kana, pinda muzvitoro izvi uye iwe uchaona chaiwo madikisheni avakagadzirira, kubva ku84% mune semuenzaniso Zombie Night Kutyisa, kusvika ku50% mune vamwe vakaita saDarkwood, kunyangwe iwe uchizowana mamwe akawanda mazita ane zvakakosha kudzikisira senge PLague Inc: Yakashanduka, Aragami, Kufa LIght, Oxenfree, SOMA, Matanda Ekutya, XCOM 2, nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Halloween inounza madhiri anotyisa pamitambo yemavhidhiyo pane Steam, GOG, Kuzvininipisa ...
SUSE inoda kuwedzera chirongwa chayo chedzidzo kutenderera pasirese
Linux Mint 19.1 'Tessa' iri kuuya ino Kisimusi